✅ CycleTrader amin'ny fampiharana ara-barotra -Day Trade eminis ES500 | NQ100 - NinjaTrader 8 Raha manana tombony azo ampiasaina ianao amin'ny CycleTrader, dia sarotra ny tsy manangom-bola.
Fri, Jolay 19, 2019
CycleTrader Endrika fampiharana ara-barotra
CycleTrader Custom Trading Systems - Strategies
Mihazakazaka isika amin'ny NinjaTrader 7 & 8
Fanamarihan'ny mpanjifa - Indikatiora - Jona 25th
Asa lehibe tsara Jerome !!! Ity CT09 Bare Delta Profile ity dia manome antsika toerana manan-danja hiditra sy hamarana ny tsena. Ampiasao ireo tabilao lavalava tianao hatao mba hanatsarana ny varotra. Manana valiny mahasoa izy raha matoky ny matematika !!! Ity vaovao ity dia manome antsika faratampony. Raha niresaka izahay omaly, dia niteny $ 7,400 aho tamin'ny herinandro lasa niaraka tamin'ireo endriny CT sy $ 312 tamin'ny alin'ny alin'ny alim-bolana niaraka tamin'ireo fampahalalana vaovao taorian'ny nandefasana azy ireo miaraka, sy $ 2,500 androany. Tiavo ny CT09 ... Ity ny porofo. MISAOTRA ANAO!!
Fanamarihan'ny mpanjifa - Indikatiora - Jona 26th
Nodorana imbetsaka aho taloha ary rehefa nifampidinika tamin'i Jerome momba ny fampitàny azy aho dia nanontany azy aho hoe nahoana ireo no tsara kokoa. Ny valiny dia nanandrana ny demo ary nahita voalohany. Nanao izany aho ary ankehitriny dia nividy azy ireo aho. Afaka nahita ny vidin'ny vidin-javatra hidirana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha aho. Io ihany koa ny CT 09 dia nanome ahy ny fivoahana tsara indrindra. Misaotra an'i Jérôme noho izy namorona ireny. Manova ny fomba fanaovako izany ary ankehitriny aho manangom-bola. Avoany $ 1450 androany amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 betsaka ao amin'ny ES 500.
Ron J. Day Mpivarotra, Tucson, AZ
CycleTrader hetsika ara-barotra NT8
14 Andro Fitsarana
Aza avela hiverina any ivelany intsony
© Copyright 1988 -2019 Bressert Trading Technology, LLC. - Fri, Jolay 19, 2019
Customer Comment - Indikatoren
Wow, Great Courses !!! Hitako izao fa marina ianao! Afaka miditra amin'ny vidiny tsaratsara kokoa ianao ary matoky ny varotra tsirairay. Misaotra anao mampiseho izany amiko ... up $ 875 ny andro voalohany nifanandrify tamin'ireny modely ireny. Azonao atao ny manana ny Pot of GOLD! MISAOTRA ANAO!
Customer Comment - Indikatoren - Juni 18th, 2019
Hi - tiako ny rafitra varotra. Nataoko $ 1,000 dollars avy tamin'io andro voalohany io niaraka tamin'ny kaonty simulator amin'ny mpivarotra ninja. Ka novidiko androany.
... MAHAFALY AN'I INDICATORS !!!
Dan BR - Mpivarotra Andro
Hello Jerome, tsy maintsy ilazako aminao fa mampivelatra ny varotra mampiasa ny fampitam-baovaon-drivotra.
Customer Comment - Systems - Jona 11th, 2019
Vita fotsiny ny dingana iray amin'ny Top Step 50K miaraka amin'ny 11 andro. 🙂 mampiasa ny paikady 1003!
Customer Comment - Indikatoren - Mai 31st, 2019
Jerome- Nanao andro tsara aho androany tamin'ny voalohany niaraka tamin'ireo famantarana; navoaka $ 1900 amin'ny e-minis. Tena toy ny mahita ny solomasoko sy mametraka azy ireo aho, afaka mahita ny tsena mazava amin'ny fomba izay tsy misy fotsiny any an-toeran-kafa. - Hiverina aho ary hamita ny fividianako mandritra ny faran'ny herinandro - manantena ny hanana anao tsara.
... Tiako, ary tsy hanakaloko mihitsy raha tsy CycleTraderPro, hatrizay!
Fanamarihan'ny mpanjifa - Indikatiora - Jona 21st
Amin'ny fotoana 1 ofisialy sy 40 mins aho dia manangana $ 1,000 mivarotra ny sarimihetsika minitra 1 aho fa ny fivarotana 1 fifanarahana ary 2 raha ilaina. Manaova varotra fotsiny izay nasehonao ahy ... fa ny tebiteby faran'izay kely indrindra efa nataoko hatramin'izay.
Tsy azoko antoka raha misy olon-kafa any ivelany mampiseho ny volavolan-dalany ho toy ny mari-pamantarana ny fomba ataonao. Saingy ny tapakila volamena mba hahita ny fironana! Asa mahagaga!
Miandry ny handray ny varotra aho mandra-pahitako ny Volan'ny VMIa mandeha amin'ny làlana iray mitovy amin'ny sandan'ny index sy BOOM! OAY!
Bader, CA - Mpivarotra andro NQ
Customer Comment - Indikatoren - Juni 20th, 2019
Tiako ny VMI sy ny tsipika maitso miaraka amin'ny laharana bar. Asa goavana Jerome. Misaotra
Hitako ny tenako rehefa nahita ny CycleTRADER Systems aho. vokatra mahagaga. Ny Euro dia nanao $ 6335, ary avy eo $ 3800 ... Misaotra betsaka an'i Jerome, nanao asa ara-tantara ianao tamin'ny famolavolana ireny rafitra ireny ho anay.
Bart D - System Trader Allemagne
Tiako ny fampisehoana taorian'ny fanombanana bebe kokoa - Nividy azy ireo aho! Izany indrindra no tiako hividy. Tahaka ny fanampiana tena sarobidy azo ampiasaina amin'ny varotra real-time izany. Tena manana vokatra tsara ho an'ny tanjoko ianao. Izaho dia mifanaraka tsara amin'ny toerana misy anao manararaotra ny tsena.
Adam C - Mpivarotra andro
Jerome - Ny CT 34 Fanohanana / Resistance Ny Windows sy ny CT 09 Bar Volon'ny Delta dia tsy azo tsinontsinoavina.
Adala aho raha manao ny mifanohitra amiko, raha ny mahazatra no jerena amin'ny delta bars, izany hoe mivarotra mena. Ankehitriny dia tonga eo am-baravarankely aho ary mijery mividy mena sy mivarotra amin'ny hoe maitso satria izany no fomba fiasa ary azoko jerena avy any amin'ny Indikativa Cycle Trader vaovao.
Na izany na tsy izany, mpikirakirana lalao hafa ho ahy. Ny famonoana azy roa andro lasa miaraka amin'ity tabilao baobaboro 15 min delta ity
Robert - Mpivarotra andro
Customer Comment - Indikatoren - Juni 19th, 2019
Jerome, - Ny teny dia tsy afaka manoritsoritra ny asan'ny Cycle Trader. Azonao atao ihany ny manolotra mpivarotra marobe maro izay azo amidy tanteraka mba hikorontana ny tsena isan'andro sy isan'andro ... .complete tenimiafina. Miaraka amin'ny fanavaozam-baovao maro sy ny fanavaozana izay manatsara kokoa ny rindrambaiko efa misy sy mahazatra dia tsy mitsahatra mampitony ahy. Ianao dia mpanao mari-trano marina, mpivarotra mpivarotra.
Mandrotsaka mandrakariva ny tsenan'ny fivoarana tsy tapaka nefa mifandray amin'ny metodôma fototra. Ny fanavaozana vao haingana miaraka amin'ny volavolan-tsarimihetsika vaovao sy TRUE / support / windows / zones azo antoka dia toa tsy nisy zavatra hitako taloha. Fantatrao ny fotoana hijerena mivarotra sy mividy tsy misy fanilikilihana ny fanadihadiana. Sarotra ho an'ny fivarotana ankehitriny izany. Tena tanjona ara-barotra.
Maro no handray soa amin'ny rindrambaiko. Izaho dia mpivarotra kely (2-3 fifanarahana) ary mahalana aho ka tsy mahafeno ny tanjoko isan'andro amin'ny 1K mampiasa ny rindrambaiko. Tahaka ny manana solomaso Xray ary afaka miandry ny vary hitranga ianao. Araho fotsiny ny "math" araka ny filazanao. Tsy mety ho marina kokoa.
Tsy mandainga ny antontan'isa!
Kidaladalan'ny fampisehoana vokatra maro raiki-tampisaka fetra, sasany izay voalaza eto ambany. Tsy misy solontena dia manjary misy tantara fa dia na dia mety hahatratra tombom-barotra, na very mitovy amin'ny an'ireo aseho; Raha ny marina, dia misy matetika maranitra mitovy kidaladalan'ny fampisehoana vokatra sy ny tena vokatra tatỳ aoriana tratra misy fandaharana manokana ara-barotra.
Ny iray amin'ireo ny fetran'ny mety ho vitan'ny kidaladalan'ny fampisehoana vokatra milaza izy ireo ankapobeny voaomana ny tombontsoan'ny hindsight. Ankoatra izany, dia kidaladalan'ny ara-barotra dia tsy tafiditra amin'ny loza ara-bola, ary tsy misy firaketana an-tsoratra ara-barotra kidaladalan'ny afaka tanteraka mandrafitra ny fiantraikany ara-bola mety ny tena ara-barotra. Ohatra, ny fahafahana Haharitra Ihany very na ny manaraka fandaharana ara-barotra iray manokana na dia eo aza ny varotra ara-nofo dia very hevitra izay afaka ihany koa ny fiantraikany ratsy izany eo tena vokatra ara-barotra.
Misy maro ny antony hafa mifandray amin'ny tsena amin'ny ankapobeny, na ny fampiharana ny rehetra manokana ara-barotra fandaharana izay tsy azo tanteraka isaina ho amin'ny fiomanana ny kidaladalan'ny fampisehoana vokatra sy ny rehetra izay mety fiantraikany ratsy raharaham-barotra valiny doza famborahana: hoavy sy ny forex varotra misy Mitana vy very ary tsy ho an'ny mpampiasa vola rehetra. Ny mpampiasa vola rehetra mety mety very na mihoatra noho ny fampiasam-bola voalohany. Capital doza ny vola izay mety ho very tsy mampidi-doza ny olona ny fiainana ara-bola na fomba fiarovana. Mety ihany capital tokony ampiasaina amin'ny varotra, ary ireo ihany no mety renivohitra ampy amin'ny tokony hihevitra varotra. Past fampisehoana dia tsy voatery ho avy filazana manoro ny matoanteny vokatra. Disclosure: Fiarovana sy ny fampiasam-bola amin'ny entana mitaky Mitana loza ary tokony tsy ho nanoratra tsy fahalalana ny loza rehetra mifandray amin'ny fivarotana sy ny fividianana ny Fiarovana.
Ny cycletrader, profittrader voalaza Ao anatin 'izao ny rindrambaiko natao ho fitaovana manampy ny mpampiasa vola eo amin'ny fampiasam-bola fanapahan-kevitra. Manana andraikitra hany fanombanana sy mamaritra rehefa ary inona no teny mba manao na inona na inona varotra, ary ny famaritana ny mahamety ny safidy.
By mampiasa vola ao amin'ny Fiarovana na ny entana, dia afaka very vola ny vola rehetra. Past fampisehoana tsy manome antoka amin'ny hoavy vokatra. Ny rafitra ara-barotra voalaza ao amin'ny tranonkala ity raha ny marina dia tsy afaka manao anao vola sy Tokony ho fantatrao ny mety tafiditra voatanisa etsy ambony.
Ilaintsika ny manambara izany - Ity fampisehoana ity dia ho an'ny tanjona ara-panabeazana ihany ary ny fanehoan-kevitra dia ny an'ny mpanolotra ihany. Ny haba rehetra natolotra dia tokony ho raisina ho toy ny fitsaboana ary tsy tokony andrasana hokosoana amin'ny kaonty ara-barotra mivantana.
Ny fijoroana vavolombelona hita ato amin'ity tranonkala ity dia tsy mety ho solontenan'ny mpanjifany na mpanjifa hafa ary tsy fiantohana ny fahombiazan'ny ho avy na ny fahombiazany.